Osprey ဗွီဒီယိုသည် Wowza Streaming Cloud ဖြင့် Encoding ထုတ်ကုန်များကိုပေါင်းစပ်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » Wowza လွှတိမ်တိုက်နှင့်အတူ Osprey ဗီဒီယို Integrated Encoding ထုတ်ကုန်များ
Wowza လွှတိမ်တိုက်နှင့်အတူ Osprey ဗီဒီယို Integrated Encoding ထုတ်ကုန်များ
Osprey ဗီဒီယို ယနေ့က၎င်း၏ encoding ကထုတ်ကုန်ယခု Wowza လွှတိမ်တိုက်™ streaming ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူပေါင်းစည်းကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါပေါင်းစည်းမှုအဘယ်သူ၏ဖြည့်စွတ်ထုတ်ကုန်မြောက်မြားစွာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အများအပြား application များအတွက်အကောင်းဆုံး-of ဖောက် streaming များဖြေရှင်းနည်းကိုဖန်တီးရန် Wowza ၏နည်းပညာနှင့်အတူပေါင်းစပ်တဲ့ Wowza မီဒီယာစနစ်များ™နည်းပညာမဟာမိတ်အဖွဲ့မိတ်ဖက်အဖြစ် Osprey solidifies ။
"ဒီမိတ်ဖက်နှင့်အတူ streaming များစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောကုမ္ပဏီနှစ်ခုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကြောင်းအရာဖမ်းမိ, encoding ကနှင့်ဖြန့်ဝေဘို့အကောင်းဆုံး-In-class ကိုဖြေရှင်းချက်ပူဇော်အထိ teaming နေကြတယ်" ဟုရော်ဂျာ Bieri, အထွေထွေမန်နေဂျာကပြောပါတယ်, Osprey ဗီဒီယို။ "Wowza နှင့် Osprey နှစ်ဦးစလုံးဖောက်သည်သူတို့ရဲ့မစ်ရှင်-အရေးပါသည်ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက်အခြားယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အဖော်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမှုအားဖြင့်အသီးအသီးအကျိုးရှိမည်။ "
Osprey ရဲ့ Talon G1 ဟာ့ဒ်ဝဲအန်ကုဒ်နှင့် (Osprey ဖမ်းယူကတ်များနှင့်အတူဒွန်တွဲ) Ceylon software ကိုအန်ကုဒ်အခု Osprey ထုတ်ကုန်နှင့်အတူအမြန်ဆက်သွယ်မှုများနှင့် Wowza လွှတိမ်တိုက်၏တိုးမြှင်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ခွင့်ပြုထားတဲ့ Wowza APIs များကိုမှတဆင့် Wowza လွှတိမ်တိုက်နှင့်အတူပေါင်းစည်းနေကြသည်။ ထုတ်လွှင့်, OTT, ပညာရေး, ဝတ်ပြုရေးလုပ်ငန်း, အစိုးရ, အိမ်သူအိမ်သားများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတို့အပါအဝင် - - ဤပေါင်းစည်းမှုနှင့်တကွ, Wowza နှင့် Osprey ထုတ်ကုန်သူတို့ရဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်စျေးကွက်မျိုးစုံပလက်ဖောင်းတစ်လျှောက်အဆုံးမှအဆုံးသို့ streaming များစွမ်းရည်များကိုထိုကဲ့သို့သောတိုက်ရိုက်အားကစားအဖြစ် applications များနှင့် ဖြစ်ရပ်များလွှမ်းခြုံသို့မဟုတ်အစည်းအဝေးများ, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်သင်တန်းများ၏တိုက်ရိုက်လွှင့်။
Osprey Wowza ရဲ့ API ကိုသတ်မှတ်ချက်များကိုသုံးခြင်းနှင့် Wowza software နှင့်အဆိုပါ Osprey ထုတ်ကုန်များအကြားတိကျသောပေါင်းစပ်စွမ်းရည်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ Configurations နဲ့ Osprey ထုတ်ကုန်တိကျသတ်မှတ်သော setting များကိုတစ်ခုတည်းကလစ်နှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်နိုင်အောင် Wowza ယင်း၏ Wowza လွှတိမ်တိုက် user interface ကိုအတွင်းရရှိနိုင် Pre-စုံစေတော်မူပြီ။
အကြား "ဒီ API ကိုပေါင်းစည်းမှု Osprey ဗီဒီယို'' s ကို Talon နှင့် Ceylon ထုတ်ကုန်များနှင့် Wowza လွှတိမ်တိုက်တက်ရဖို့နှစ်ဦးစလုံး Wowza နှင့် Osprey ဖောက်သည်ဖွနဲ့ streaming များလျင်မြန်စွာကျနော်တို့မရရှိနိုင်ကြပြီတစ်ရိုးရှင်းသောလက္ခဏာသက်သေဆက်သွယ်မှုများနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်မှကျေးဇူးတင်စကား, "ကားလို့စ်ဖာရက်, Wowza မီဒီယာစနစ်များမှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဝင်ငွေအရာရှိကပြောသည်။ "Wowza နှင့် Osprey ရှေ့ဆက်အချိန်၏လုပျငနျးပွုပါပွီများနှင့်ဆက်သွယ်မှုရိုးရှင်းသောခဲ့ကြပြီးမည်သည့် configuration ကိုကူညီပြီးဖယ်ရှားခဲ့သည်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောမိတ်ဖက် Wowza နှင့်သေချာ Osprey ဗီဒီယို မည်သည့်ကိစ္စများပေါ်ထွန်းသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုထောကျပံ့ဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်။ "
အကြောင်းအရာ Osprey ဗီဒီယို
Osprey ဗီဒီယို'' s ကိုထုတ်လွှင့်, အင်တာနက်တီဗီနှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းမှ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, အစိုးရနှင့်အာကာသအထိစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ပရီမီယံဗီဒီယိုရိုက်ကူးနည်းပညာ drives တွေကိုမစ်ရှင်-အရေးပါဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေ။ ဗီဒီယိုကိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတိုက်ရိုက်လွှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်လှမ်းမမီဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ, Osprey ဗီဒီယို ကပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့ flagship ဖမ်းယူကတ်များနှင့်ယာဉ်မောင်းအတွက်နည်းပညာကိုဖောက်သည်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများအတွက် ပို. ပို. မြင့်မားသောမျှော်လင့်ချက်များကျေနပ်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့သူ့ရဲ့တိုက်ရိုက်-streaming များနှင့် encoding ကထုတ်ကုန်များအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအစဉ်မပြတ်, အရည်အသွေးမြင့်အဘို့ဖောက်သည်ဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်အစဉ်အဆက်-ဖြစ်ပေါ်နေသောဗီဒီယိုကပလီကေးရှင်းယုံကြည်စိတ်ချရသော tools များက၎င်း၏ထုတ်ကုန်အစုစုကိုတိုးချဲ့နေပါတယ် - IP ကိုကျော်ကဗီဒီယိုမှ စာတန်းထိုး, ကျော်လွန်ပြီးဖမ်းမိခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူး ... နှင့် 4K မိုဘိုင်း streaming များ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.ospreyvideo.com.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2016-04-29
ယခင်: Help Desk အထူးကု - မောင်လေးကလည်းသင်တန်းပေး
နောက်တစ်ခု: CNN ကသတင်းလက်ထောက်